ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: ခင်းဗျားတို့ပဲမှားသလား ကျတော်ပဲမှားသလား(လူတွေစဉ်းစားကြ စဉ်းစားကြ လောကအတွက်)
ခင်းဗျားတို့ပဲမှားသလား ကျတော်ပဲမှားသလား(လူတွေစဉ်းစားကြ စဉ်းစားကြ လောကအတွက်)
သင့်ကို စကားပြောနေသည့် ပုံရိပ်များ ....
ပုံအကြီးကြည့်လိုလျှင် ပုံပေါ်တွင် ကလစ်ထောက်၍ကြည့်နိူင်ပါသည်..........
ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်တို့ရေ သားသားမီးမီးတို့ကို သနားကြပါအုံး သားသားမီးမီးတို့ကသက်ရှိလူတွေပါ
အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ဆိုင်ခန်းနဲ့ဈေးရောင်းနေရမဲ့ အရွယ်ကောင်းလေးတွေပါ အပျိုရွယ်လေးတွေဆိုတော့ သူတို့လည်း ရှက်တတ်ပါတယ်.............(ဟဲ့ကောင်လေးချောချောလေး အရှေ့ကဖြတ်လျောက်သွားတယ် နင်က ခေါင်းငုံ့ထား ငါကနောက်လှည့်စကားပြောနေမယ်.....)
စေတီဆောက်လုပ်ဖို့ နေရာမလွတ်လို့ ဖယ်ပေးလိုက်ရတာ စေတီကအရေးကြီးတယ်လေ..............
သားလေးရေ ဒို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာပြည်နိုင်ငံဆိုတာ ဒါပဲသားလေးရေ.........
ဂေါတာမကုလား ၇ွှီးထားတဲ့ နတ်ပြည၊်နိဗ္ဗာန်၊ငရဲပြည်အထိ အရောက် ပို့ပေးမည်။ ဂိတ်ဆုံးငရဲပြည်ထိ မောင်းမါ... (အထူးယာဉ်) ဒို့များရဲ့ဘဝ ဒုက္ခကဆိုးလိုက်တာ သူများနိုင်ငံတွေမှာ လူတစ်ယောက်တည်းကို ပေါပေါသီသီကားဝယ်စီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒို့များနိုင်ငံကတော့ကားတစ်စီးကို လူပြွတ်သိပ်ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းစီးနေရပါလား...... အိုးကုလားဗုဒ္ဓသင်လည်းသေသွားပြီ သင့်တရားက ဒို့တွေကိုမကယ်နိုင်ပါလား (ဂေါတာမကုလား=====> ဟဲ့ငနာ ကားကျပ်ရင် ကျပ်တယ်လို့ စိတ်ထဲကမှတ် ဘာမှပြန်မပြောနဲ့)
မလာပါနဲ့ ဒို့လျှောက်မဲ့ဘဝခ၇ီးကြမ်းတယ် (ဂေါတာမ====>နင်ကမှတော်အုံးမယ် အသင့်ရှိပြီးသား ညောင်ပင်က ငါ့စံအိမ်ပဲမောင်ရေ)
အိုးဗုဒ္ဓ..... ရေ....... ကယ်ပါအုံး(ဂေါတာမကုလား======> ငါလည်းမလုပ်တတ်ဘူး)
မိဘမဲ့ကလေးများ အမေရေ ခေါ်တဲ့အသံများလား (ဂေါတာမ======>ငါ့သားတွေတောင် ငါစွန့်ပစ်ပြီး တောထွက်သွားတာ)
ဆာလောင်မူများနဲ့ ရာသီကပ်ဆိုးများကြားက (ဂေါတာမ======>ဆာနေရင် တောင်းစားကြ ငါလည်း ဒီလိုပဲ တောင်းစားခဲ့တာ)
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ပေါ်က အီတူး ကိုယ့်ဘဝက အသေဆိုး မိန်းခလေးရယ် မင်းကိုချစ်နေတာတဘဝလုံးပါကွယ် (ဘယ့်သူကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး)
ရှင်တို့အွန်လိုင်း ဒီမိုကရေစီ ဂတုံးများသိအောင်ပြောလိုက်မယ် ကျမတို့ဘဝဟာ ဒါပဲ
သားသားတို့မီးမီးတို့က လူတွေပါ သက်မဲ့အရုပ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး သားသားမီးမီးတို့ကို အလင်းရောင်ပေးပါ..... သားသားတို့မျက်လုံးများက မြင်တတ်ပါတယ် ကြည့်တတ်ပါတယ် စာဖတ်လို့ရပါတယ်....
သက်မဲ့အရုပ်ပေါ်က မီးကထိန်ထိန်ကိုလင်းလို့ (ကိုယ်တော်ချော =====> ကျတော်ပဲမှားသလား ခင်ဗျားတို့မှားသလား စဉ်းစားကြပါ)
့မြန်မာပြည်မှာ မီးမပေးနိုင်သည့်သတင်းသည် အလွန်မှားယွင်းပါသည်...... ဗုဒ္ဓမြန်မာလူမျိုးတို့သည် မီးအလင်းရောင်ကို မလိုအပ်ပါ အိန္ဒိယနိုင်ငံကကုလားဆံပင်မှာ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးလိုအပ်နေပါသဖြင့် သက်ရှိပြည်သူများအနစ်နာခံ၍ သက်မဲ့စေတီကို ပေးလှူနေရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်မှ မီးမပေးနိုင်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ...?????????
ရွှေဝါရောင်ထိန်ထိန်ညီးလို့ ဒို့များကိုယ်ပေါ် မလိုအပ်ပေ ၊ သက်မဲ့ရုပ်တုပေါ် လိုအပ်ပေ အဲဒါမှ ဗုဒ္ဓဝါဒ.....ဒုက္ခဝေဒနာတွေ.... (ကျတော်မှားသလား ခင်ဗျားတို့မှားလား)
သက်ရှိလူများကိုတော့ အရေးမလုပ်ဘဲ ဒီအရုပ်ကိုအရေးတယူလုပ်နေတော့ ???????(ခင်ဗျားတို့ပဲမှားသလား ကျတော်ပဲမှားသလား)
ကုလားမျက်နှာရှေ့မှာ အီးပေါက်ရင် စီးပွားရေးလာဘ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ လူမသိတုန်း အီးခိုးပေါက်နေတာ ဟီဟီး....(ကိုယ်တော်ချောပဲသိစေ...ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့)
(စာသားရေးပေးသော် သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by messenger at 1:34 AM
Labels: ခင်းဗျားတို့ပဲမှားသလား ကျတော်ပဲမှားသလား